हापुरे सिमेन्ट उद्योग कहिले निर्माण हुन्छ ? « Farakkon
हापुरे सिमेन्ट उद्योग कहिले निर्माण हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुन ८ गते बुधवार
बबई गाउपलिका ५ मा रहेको हापुरे सिमेन्ट उद्योग उद्योग निर्मार्ण स्थल । तस्बिर – राजेश खत्री
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको भनिएको दाङको बबई गाउँपलिका वडा नं. ५ मा निर्माण गर्ने भनिएको सिमेन्ट उद्योगको निर्माण प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझैं अन्यौंलता कायमै छ । यहाँका स्थानीय एक युवा झुपु बुढा क्षेत्रीका अनुसार २०६३ सालमा झन्डै ६० विगाहा जग्गा सोही प्रयोजनका लागि खरिद भएको छ ।
झन्डै ५÷६ बर्ष पहिले सामान्ने तारवार र एउटा सानो घर निर्माण गर्नु बाहेक यहाँ अरु कुनैपनि संरचना निर्माण गरिएको छैन । आज भन्दा १२ बर्ष पहिले प्रति कठ्ठा जग्गा ३० हजारका दरले स्थानीय संग सिमेन्ट निर्माण कम्पनीले जग्ग खरिद गरेको भएपनि त्यसयता उक्त जग्गा उपयोग विहिन बन्दै आएको छ ।
लामो समय सम्मपनि उद्योगको लागि कुनैपनि संरचना निर्माण नहुँदा स्थानीयहरु उद्योग निर्माण हुनेमा शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । हापुरे सिमेन्ट उद्योगकै लागि भनेर बाँकेको कुसुमवाट यहाँ सम्म सोझै १३२ केभि प्रशारण लाइनपनि विस्तार भइसकेको छ । हापुरे स्थित सव स्टेसनको विहिवार मात्रै उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनलेले उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।